Top 10 Easy Tips Fa Train Riding Smart Everywhere | Save A Train
Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > Top 10 Easy Tips Fa Train Riding Smart Everywhere
Nandeha lamasinina dia mety ho iray amin'ireo tena miala voly sy mifaly fomba hialàna. Mila mahafantatra ny fomba hanaovana ny tsara indrindra avy ny dianareo ary ho marani-tsaina. Ny hoe tsara voalamina, ary fantany izay no mandeha lavitra mankany amin'ny fanaovana ny iray nandeha lamasinina hanasongadinana ny fety na ny traikefa nahafinaritra. Topazo maso ireo Top 10 Easy Tips for Train Riding Smart. Aoka ho voaomana ho amin'ny manaraka dia.
Top 10 Easy Tips for Train Riding Smart – SOSO-KEVITRA ONE: Buy ny Ticket mialoha
Top 1 ny Top 10 Easy Tips for Train Riding Smart, Ataovy azo antoka ny hanaovana drafitra ny diany sy ny mividy ny lamasinina tapakila mialoha mba hahazoana antoka azonao eo amin'ny fiaran-dalamby tianao. Aza adino ny manontany momba misy fihenam-bidy Specials na izay mety ho ampiasaina ho anao. Iza no tsy tia hamonjena ny sasany vola! Ianao dia ho afaka ny afa-tsy kely-bola mandany amin'ny faritra hafa ny diany.
Vehivavy eo amin'ny gara
SOSO-KEVITRA FAHAROA: Stow ny entana
Ny tsara indrindra Easy Tips for Train dia foana Tsy tokony hijery ny kitapo in ary raha avy amin 'ny antonony ny habeny ihany koa ianao dia afaka misafidy ny hitahiry azy ho amin'ny fitoeran'entana nataony ambony noho ny seza na anja telozoro eo an-toerana eo amin'ny back-to-miverina seza. Ity fomba manana ny kitapo akaiky anareo amin'ny fotoana rehetra.
SOSO-KEVITRA FAHATELO: Aoka ho Smart Amin'ny Bags
Dia tsy hoe izay rehetra manana ny mpangalatra fiaran-dalamby vonona avy hatrany ireo tamin'ny voalohany dia mahazo vintana, fa aleo ho eo amin'ny lafiny soa aman-tsara. Aoka ianao ho mailo rehefa tonga ao an-kitapo. Store izy ireo lalin-tsaina, fa tsy any amin'ny faran'ny ny lamasinina fiara. Raha manana kitapo ianao dia afaka ihany koa ny clip ny andilany ny entana fitoeran'entana mba ho azo antoka fanampiny.
SOSO-KEVITRA EFATRA: Find sezanao
Raha nampiasa ny teo aloha Easy Tips for Train Travel ary voatokana seza hianareo rehetra nandamina. Afaka mandeha mivantana any amin'ny toerana. Raha tsy, ianao milaza Tonga soa eto amin'ny seza misy fepetra. Raha misy tsy misy maro ireo, jereo ny famandrihan-toerana Tags nataony ambony noho ny seza nalefa na ny mampitohy varavarana. Ny Tags mampiseho ny mihinjitra ny ny dia izay no namandrika toerana ho an'ny. Mampiseho ihany koa izy ireo raha mahazo eny anoloan'ny tompony na dia mahazo anao dia afaka mandray izany toerana.
SOSO-KEVITRA DIMY: Ampiasao amim-pahendrena ny Train Time
Alao ny fahafahana mampiasa ny fotoana lany eo amin'ny fiaran-dalamby nankany hahazo ny tenanao voalamina. Afaka manaraka drafitra ho an'ny toerana halehany. Ampiasao izao fotoana hamakiana ny boky torolalana, jereo ny toro-lalana ny manaraka toerana halehany. Mandehana noho ny sary, mandamina ny kitapo, -droa jereo ny fifandraisana, na hamita asa hafa tokony raha mbola manana ny fotoana. Raha ny lavitra intsony izany ihany koa ny fahafahana handray tsara ao ny sasany amin'ireo zavatra hita.
Lyon Airport mankany Nice amin'ny lamasinina
SOSO-KEVITRA ENINA: Ampiasao ny Bathrooms On The Train
Mba hamonjy ny fotoana sy ny vola ary manandrana mampiasa izany Easy Tips for Train sy mampiasa ny efitra fandroana eo amin'ny fiaran-dalamby ho manohitra ny fampiasana ireo amin'ny gara. Ny fiaran-dalamby kabine matetika toerana any amin'ny faran'ny fiara ary matetika madio be noho ny kabine tao amin'ny toby, ary koa ny ho afaka.
SOSO-KEVITRA FITO: Talk to Locals and Other Travelers
Soso-kevitra 7 avy ny Top 10 Easy Tips for Train Riding Smart, Inona no fomba tsara kokoa ny mianatra momba ny tanàna na firenena noho ny miresaka amin'ny sasany ny an-toerana, na ny mpandeha hafa, izay mety ho any amin'ilay toerana halehanao? Izy ireo dia ho afaka ny hilaza aminareo ny ins sy outs ny toerana halehany dia manoro hevitra anao momba ny zavatra tokony hatao ary inona no tsy tokony hatao. Andramo namaky ny ranomandry amin'ny alalan'ny fametrahana fanontaniana, fanatitra ho hanitra na mampiseho zavatra avy amin'ny taninao.
SOSO-KEVITRA VALO: Entana ny Snack
Nandeha noana asa sy ny azonao atao ny entana zavatra sakafo maivana ny rehefa eo amin'ny fiaran-dalamby. Afaka-boay ny amin'ny toerana tena sakafo amin'ny fivarotana lehibe eo an-toerana, na deli na mitsidika ny divay lakaly eo anatrehanao mitsambikina eo amin'ny fiaran-dalamby; indrindra gara manana, fara fahakeliny, ny iray amin'ireo. The sakafo natolotra tamin'ny fiarandalamby Matetika Bland sy lafo kokoa ianao raha tsy mandoa ny kilasy voalohany fanaovam-panavotana.
SOSO-KEVITRA Nine: Fantaro Aiza To Get Off
Aoka ho fantatrareo izay peo dia iray amin'ireo ilaina Easy Tips for Train Tsidika. Rehefa tonga ao an-tanàna intsony ianao amin'ny toby suburban maromaro tamin'ny famantarana mampiseho ny toerana halehany ny anarany sy ny anaran 'ny manodidina, fa tsy mitsambikina eny ambara-pahatratranao ny foibe toerana. Afaka mangataka foana na mpiara-mpandeha mijery ny boky torolàlana ho an'ny fanampiana bebe kokoa.
SOSO-KEVITRA FOLO: Tadidio Foana Train Etiquette eo an-toerana
Mariho ny fomba hafa ao amin'ny fiaran-dalamby mpandeha fiara dia manao zavatra. Raha toa izy ireo mangina, tandremo tsara ny hanaraka fitoriana. Tandremo ny famantarana izay mety hidika fa mipetraka ao anaty fiara izay voatendry mangina ny olona tonga matory na asa. Na aiza na aiza ianareo no mipetraka, Miezaka ny tsy ho mafy indrindra ny olona ao amin'ny manodidina. Aoka ho azo antoka fa tsy mba hiala sasatra ny tongotrareo eo amin'ny seza tandrifin'i anao koa, raha tsy manana ny kiraronao eny.
Raha toa ianao mahatsiaro ireo Top 10 Easy Tips for Train Riding Smart no antoka anareo ny Super lavitra sy traikefa lehibe ankapobeny. Azonao atao mihitsy aza ny sasany hihaona an-toerana vaovao sy hanao ny sasany namana vaovao! Na inona na inona azo atao raha ny amin'ny fampiofanana Tsidika. Rehefa efa nahay ireo, Diniho avy eo ny Bernina Express sy ny maro hafa!
– Raha tiany ny lahatsoratra ao amin'ny Top 10 Easy Tips for Train Riding Smart, dia aza misalasala mizara izany, dia nahazo ny fizarana fotsiny bokotra eto ambany ity lahatsoratra bilaogy.
Vonona ny handray ny lamasinina mitaingina? Boky ny seza ary aza mandoa saram misy famandrihana amin'ny – www.saveatrain.com
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-10-easy-tips-for-train-riding-smart%2F - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / izany / de na / ru sy ny maro hafa fiteny.
soso-kevitra tendron'ny fampiofanana Train Travel